NgoFebruwari 16 I-Zodiac-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi NgoFebruwari 16 I-Zodiac yi-Aquarius-Ubuntu obuPheleleyo beHoroscope
NgoFebruwari 16 I-Zodiac yi-Aquarius-Ubuntu obuPheleleyo beHoroscope
Umqondiso we-zodiac ngoFebruwari 16 ngu-Aquarius.
Uphawu lweenkwenkwezi: UMthwali waManzi . Oku kufanekisela ukondla, ukuqhubela phambili kodwa nobomi obulula baba bantu kunye nenkqubo engapheliyo yokubuyisela umhlaba wonke. Ichaphazela abantu abazalwe phakathi kukaJanuwari 20 noFebruwari 18 xa iLanga lise-Aquarius, uphawu lweshumi elinanye lwe-zodiac.
Inkqubo ye- I-Aquarius Constellation Isasazeke kummandla wee-980 zeedigri eziphakathi kweCapricornus ukuya eNtshona kunye nePisces eseMpuma. Ububanzi bayo obubonakalayo bungu-65 ° ukuya -90 ° kwaye eyona nkwenkwezi iqaqambileyo yi-alpha Aquarii.
Igama elithi Aquarius yinkcazo yesiLatin yoMthwali waManzi, uphawu lwe-zodiac lwe-16 kaFebruwari. AmaGrike ayibiza ngokuba yiIdroxoos ngelixa iSpanish isithi yiAcuario.
Uphawu olwahlukileyo: Leo. Oku kuphakamisa igunya kunye nokungamampunge kwaye kubonisa indlela abahlali bakaLeo ekucingelwa ukuba bamele ngayo kwaye banayo yonke into esayiniweyo yelanga i-Aquarius abantu abayifunayo.
Ukuziphatha: Kulungisiwe. Lo mgangatho ubonakalisa ubunjani benkani yabo bazalwa nge-16 kaFebruwari kunye notshintsho kunye nokusebenza kwabo ngokubhekisele kuninzi lwamava obomi.
4/28 uphawu lweenkwenkwezi
Indlu elawulayo: Indlu yeshumi elinanye . Oku kuphakamisa intsimi yolindelo oluphezulu, amaphupha kunye nobuhlobo obulungele ii-Aquarians ezinomdla ezinokuphumelela kuphela xa zijikelezwe ngabaxhasi bezentlalo.
Umzimba olawulayo: Uranus . Le planethi yasezulwini kuthiwa iphembelela ukungoyiki kunye nokuzimisela. Kukwakhankanywe malunga nobumnandi baba bantu. U-Uranus ngamanye amaxesha ubonakalisa ezinye zeendlela zokuphila ezingalunganga.
Isiqalelo: Umoya . Le yeyona nto yokuhamba kunye neemvakalelo zokunceda abantu abazalwe ngoFebruwari 16. Iphakamisa umntu onokuthula nothantamisayo odla ngokudibanisa abantu.
Usuku lwethamsanqa: uLwesibini . Olu lusuku olulawulwa nguMars, ke ngoko lujongana nomnqweno kunye neziko. Iphakamisa imeko ehlekisayo yabantu baseAquarius.
Indoda eyi-aries kunye ne-scorpio iyalwa
Amanani anethamsanqa: 1, 9, 11, 14, 20.
Ulwazi oluthe kratya ngoFebruwari 16 Zodiac ngezantsi ▼
Inyanga kwiVirgo Woman: Mazi ngcono
Imercury kwiTaurus: Iimpawu zoBuntu kunye nendlela ekuchaphazela ngayo uBomi baKho
Scorpio kunye nepisces yobuhlobo bokuhambelana
Indoda eyi-aries kunye nomfazi wanamhlanje
Uthini umqondiso we-zodiac wangoNovemba 2
intombi yomfazi libra indoda ebhedini
iingcebiso zesini kumfazi onomhlaza
Ukwabelana ngesondo phakathi kwe-aries kunye ne-scorpio
Ukuhambelana kobuhlobo be-libra kunye ne-sagittarius